Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa si rasmi ah ugu shaacisay saxeexeeda cusub ee Sergino Dest oo ay kala soo wareegtay Ajax, kaas oo ay kaga soo adkaatay Bayern Munich oo kula tartamaysay.
Munich ayaa ku calaacashay in la khiyaameeyey, isla markaana ay ciyaar uskagnimo ah la dheeleen Ajax iyo Barca, hase yeeshee ciyaartoyga ayaa la rumaysan yahay inuu isagu doortay Camp Nou.
Laba gool iyo lix caawimood oo uu sameeyey xili ciyaareedkii hore ayaa rikoodhka ugu jiray, waxaana hadda ay loollami doonaan Sergi Roberto oo ah laacibka haysto booska difaaca midig, hase yeeshee waxa uu Ronald Koeman u isticmaali karaa Roberto inuu geeyo khadka dhexe.
Faa’iidooyinka cajiibka ah ee uu leeyahay laacibkan ee Ronald Koeman uu ku doortay saxeexiisa ayaa ah inuu si fiican uga ciyaari karayo labada baalood ee difaaca ee bidixda iyo midigta.
Dest ayay iska dhaleen Aabe Maraykan ah iyo hooyo Dutch ah, waxaana uu u ciyaaraa xulka qaranka Maraykanka oo uu kulankiisii ugu horreeyey u saftay sannadkii 2019kii.
The Amnesty International report condemns the repression of demonstrations